Lioka 23:56b-24:7 "Ary niverina ireo ka namboatra zava-manitra sy menaka manitra. Ary tamin’ny Sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna... Ny Zanak’olona tsy maintsy hatolotra eo an-tànan’ny mpanota ka hohomboana amin’ny hazo fijaliana ary hitsangana amin’ny andro fahatelo."
Rehefa nalevina Jesosy Kristy dia niomana ireo vehivavy maromaro ka nanamboatra zava-manitra sy menaka manitra hahosotra ny fatiny. Rehefa tonga tany amin’ny fasana ny maraina izy ireo dia gaga raha nahita ny vato nikodia sady tsy nahita ny fatin’i Jesosy tao. Taitra sady nalahelo izy ireo. Nisy anjely nanambara anefa fa velona Izy ary tsy ao am-pasana intsony. Vaovao lehibe sady mahafaly no mahafinaritra izany an! Velona indray ny fanantenana satria nitsangana tamin’ny maty ny Tompo. Tsy maty intsony i Jesosy Kristy ilay Zanak’Andriamanitra. Velona mandrakizay Izy ary ho velona mandrakizay koa ianao raha mino Azy. Haleloia! Tsy mivavaka amin’ny maty isika fa amin’ny Jesosy Kristy Izay velona mandrakizay.